Ireo vao haingana sy ho avy
Ny Dr. Peter Jan Margry dia manana mari-pahaizana MA ao amin'ny History (University of Amsterdam 1983) sy ny PhD avy amin'ny Oniversiten'Antananarivo.
Yakov M. Rabkin dia Profesora Emeritus momba ny tantara ao amin'ny University of Montréal.
Holly Folk dia mpahay tantara izay mandalina ny fivavahana sy ny kolontsaina 19th sy 20th taonjato. Ny fikarohana nataony dia mitodika amin'ny karazana ...
Amin'ny maha-mpanoratra sy mpanao gazety, Dr. David V. Barrett, dia manadihady sy manoratra amin'ny ankapobeny momba ny lohahevitra ara-pivavahana sy esoterika. Manana izy ...
Jana Mathews dia profesora momba ny literatiora medievaly ao amin'ny Rollins College ao Winter Park, Florida. Ny asany amin'ny premodern ...
Bernard Doherty dia nahazo mari-pahaizana tao amin'ny Macquarie University. Taorian'ilay PhD, Bernard dia mpiara-miombon'antoka avy amin'ny Oniversite ao amin'ny Ivotoerana ho an'ny ...
Nikola Pešić (1973) dia mpanakanto malaza ary manam-pahaizana mahaleo tena avy ao Belgrade, Serbia. Tao amin'ny 2002 dia nahazo ny MA izy ...
Dr. Josh Schwieso nisotro ronono tao amin'ny 2011 ho Lefitry ny Sampan-draharahan'ny Departemantan'ny Psychologie ao amin'ny Oniversite Andrefana.
James A. Santucci dia Profesora Emeritus ao amin'ny Departemantan'ny Fianarana Ara-pinoana ao amin'ny Oniversiten'i California ao Fullerton. Ny PhD ...
PierLuigi Zoccatelli dia profesora momba ny sosiology ny fivavahana ao amin'ny Oniversite Pontifical Salesian, Turin.
Tamin'ny fotoana nanoratana, Venetia dia mpilatsaka ho fidiana PhD ary Mpampianatra ao amin'ny Departemantan'ny fivavahana ao amin'ny ...
Raffaella Di Marzio dia manam-pahaizana mahaleotena. Tao amin'ny 2016 dia nahazo ny Ph.d. ao amin'ny psikolojian'ny fivavahana amin'ny Salesian Pontifical ...
Simon Coleman dia Profesora Chancellor Jackman. Tonga tany U of T tao amin'ny 2010 avy amin'ny Oniversiten'i Sussex izy, izay ...
Yu-Shuang Yao dia nanatontosa ny foto-pahaizana sosialy momba ny fivavahana ao amin'ny Oniversiten'i Londres ao 2001. Mpampianatra mpiara-miasa izy ...
Elizabeth Miller dia taona farany tamin'ny fanadihadiana dokotera tao amin'ny Oniversiten'i Sydney. Lire la suite ...
Magnus Lundberg dia Profesoratry ny Fiangonana sy ny Asa Fanampiny ao amin'ny Oniversite Uppsala, any Soeda, izay manandanja amin'ny Kristianisma Iraisam-pirenena sy ny Fianarana mifandray amin'ny fivavahana. ...
Melissa M. Wilcox dia Profesora sy ny Holstein Fianakaviana sy ny Filoham-pianarana Ara-pinoana ao amin'ny University of California, Riverside. ...
Kenneth Small dia nampianatra lozisialy momba ny tantara, ny kolontsaina ary ny filozofia maharitra ny Theosophy nandritra ny telopolo taona mahery. An ...
Jojan Jonker (1956-) dia nahazo diplaoma tao amin'ny sehatry ny informatika ao amin'ny 1986 (Leiden University). Niasa nandritra ny taona 20 izy noho ny rindrambaiko iray.
Spyros Petritakis dia Ph.D. Kandidà amin'ny tantara kanto any amin'ny Oniversiten'i Kreta, any Gresy. Nahazo ny Tompony izy ...
The Index Index dia lisitry ny lisitry ny WRSP manara-penitra, anisan'izany ny tetikasa miavaka manokana amin'ny sehatra, faritra ary faritra. Misy indices misaraka amin'ny fidirana ao amin'ny Augmenting Resources fizarana an'ny WRSP.
Ny WRSP dia mampiditra tsy tapaka vaovao momba ny vondrona ara-pivavahana sy ara-panahy, mpitarika, toerana ary asa. Ireo vao haingana sy ho avy amin'ny WRSP, miaraka amin'ny daty famoahana, dia hasiana lisitra eto.
Ny WRSP dia natsangana ho consortium manam-pahaizana iraisam-pirenena. Ny WRSP dia tarihin'ny Filan-kevitry ny Mpanatanteraka izay ahitana solontenan'ny WRSP manokana sy ny fiaraha-miombon'antoka ary ireo manam-pahaizana manam-pahaizana manokana izay mandray anjara amin'ny fampandrosoana WRSP.
FIVORIANA FIVORIAMBE IRAISAM-PIRENENA SY NY FAHAMARINANA
(Talen'ny tetikasa: Massimo Introvigne)
FAMPIANARANA & FITSIPIKA FIFANEKENA MOMBA NY TONTOLO IAINANA
(Tale mpitantana: Simon Coleman, John Eade, Ian Reader)
FIANARANTSOA MPANJAKA MAFY
(Tale mpitantana: Joseph Laycock sy Jill Krebs)
FIVAVAHANA AMIN'NY FIVAVAHANA MOMBA NY MIRALENTA SY NY FAMPANDROSOANA
(Tale mpitantana: Rebecca Moore, Catherine Wessinger)
FIKAMBANANA MITONDRA SY FANJAKANA
(Talen'ny tetikasa: Timothy Miller)
Misy endrika maro sy fanehoana fikambanana ara-pivavahana sy ara-panahy ary asa. Ireo manam-pahaizana manana ny fahaiza-manaony fantatra amin'ny faritra voafantina dia nasaina hanangana ny tetik'asa Thematic voatanisa etsy ambony.
RUSSIA SY EASTERN EUROPE
(Tale lefitra: Dr. Kaarina Aitamurto, Dr. Maija Penttilä)
AROTALIANINA FIVORIANA FIVORIANA SY FIVAVAHANA
(Tale Tale: Carole Cusack, Bernard Doherty)
FIVORIANA FIVORIANA & FIVAVAHANA ARA-TOEKARENA IN ITALY
(Tale mpitantana: Dr. Stefania Palmisano, Dr. Massimo Introvigne)
FAHADIOVANA KADAVY SY FIVAVAHANA
(Tale mpitantana: Susan Palmer, John Peterson)
FAMPIANARANA VAOVAO JAPONESE
(Tale mpitantana: Ian Reader, Erica Baffelli, Birgit Staemmler)
Ny endriny sy ny fomban-drazana ara-pivavahana sy ara-panahy matetika dia mifanojo amin'ny sisin-tany ara-jeografika, ara-politika ary ara-kolontsaina. Ireo manam-pahaizana manana ny fahaiza-manaony fantatra amin'ny fomban-drazana manokana dia nasaina handamina ny Tetik'asa isam-paritra voatanisa etsy ambony.
Tetikasa eo an-toerana
Ny fiarahamonina any Etazonia dia nanjary nanjary niavaka ara-pinoana sy ara-panahy bebe kokoa tao anatin'ireo taona faramparany. Maro ny manam-pahaizana no nanao tetikasa fikarohana momba ny fiarahamonina mandinika ny fomba fiorenan'ny fivavahana sy ny ara-panahy ary miaina ao anatin'ny fiaraha-monina manokana. Rohy mankany amin'ireo Tetikasa eo an-toerana dia atolotra eto.
Ny WRSP dia nikarakara Fanadihadiana forum izay niresahana ny resadresaka roa nataon'ny WRSP sy ny tafatafa navoakan'ny fampahalalam-baovao hafa. Ny fifampiresahana amin'ireo manam-pahaizana sy olon-tsotra hafa dia nofidina mba hanomezana fanazavana amin'ny fampitomboana ny vondrona momba ny WRSP.
Nisy ny fandrakofam-baovao lehibe momba ny vondrona, ny olona ary ny asa aman-draharaha voarakitra ao amin'ny profil WRSP. Ny Media Center dia manondro sy ny rohy mankany amin'ny tranonkala fampahalalam-baovao marobe izay tena ilaina tokoa ho an'ireo manam-pahaizana momba ny fivavahana.
Boky, Lahatsoratra, Papo, & Tatitra
Ny WRSP dia manampy ireo profesora ara-pivavahana sy ara-panahy Articles & Papers avy amin'ny fanohanana manam-pahaizana. Manolotra loharanom-pahefana izy ireo izay hampitombo ny fampahalalana voarakitra ao amin'ny profil WRSP. Ny fahazoan-dàlana hamerina na hizara ireo fitaovana ireo dia miaraka amin'ireo mpanoratra.
Ny WRSP dia mametraka sy rohy amin'ireo fitaovana amin'ny lahatsary an-tserasera izay manampy sy manatsara ny lahatsoratra. The Video Connections Ireo endri-tsoratra dia voatanisa amin'ny abidy ary mifandray amin'ny fidirana an-tsoratra manan-danja.
Maro ireo tahiry izay niaro ny fitaovana mahaliana ny manam-pahaizana amin'ny fandalinana vondrona fivavahana ara-pivavahana sy ara-panahy ankehitriny. Maro amin'ireo tahiry ireo no kely ary tsy dia fantatra loatra. Ny WRSP dia mamaritra ireny Archive Centers ho loharano fikarohana ho an'ny manam-pahaizana.
Scholar's Corner [Eo am-panorenana]
The Fahaizana manam-pahaizana dia manolotra sehatra iray manokana izay ahafahan'ny manam-pahaizana mizara vaovao sy fomba fijery momba ny tantara, ny fampandrosoana, ny fotopampianarana, ny fikambanana, ny asa aman-draharaha, ary ny adihevitra momba ny vondrona izay voarakitra ao amin'ny WRSP (sy ireo vondron'olona mifandraika amin'izany). Access to the Fahaizana manam-pahaizana dia amin'ny fanasana.
Home | Momba anay | fiaraha-miasa | Profiles | Resources | hanome | Contact
Copyright © 2016 Tontolo fivavahana sy tetik'asa ara-panahy
Web Design nataon'i Luke Alexander